Izinzuzo ze-ECN Broker malunga nokuPhatha iiRaff Brokers | FXCC
I-Forex ECN Trading Model vs Fixed Spread Forex Broker Trading
Ngoko ke yintoni iimeko ezahlukileyo phakathi komthengisi wee-ECN / STP kunye nabathengisi beeeskredithi, abahlala bebizwa ngokuba ngaba "bathengisi bemarike"? Siye saqulunqa itafile elula yepros and cons, ukuze sichaze amanqaku aphambili ahlukeneyo phakathi kwe-ECN / Ii-STP nabathengisi kunye nokuqhuba ideskini / ukuthengisa iimakethe, kodwa sicinga ukuba nathi singaya kuloo mizuzu eyongezelelweyo ukwenzela ukucacisa umahluko ngokubanzi.
I-Plated Exchange Broker
Kwi-forex yokuthengisa iiplani zokuthengisa, umthengisi uyazi izikhundla zakho ezivulekileyo, indlela yokuhweba kunye namaqhinga kwaye unokusebenzisa le ngcaciso ukuze azuze.
Kwi-FXCC ECN, unokuthengisa ngokukhawuleza kumaxabiso aqhutywe ngamaziko ezeMali ahamba phambili.
Ukucaphulwa kwakhona kuqhelekileyo kwintengiso yesintu. I-FXCC ayifaki kwakhona. I-teknoloji yeplani kunye nexabiso elithe ngqo / ixesha elijongene nemigaqo-nkqubo yenzelwe ukuzalisa urhwebo lwakho kwixabiso lentengiso ekhoyo.
I-FXCC ayithathi iindawo ezichasene nabaxhasi bayo.
Ukurhweba ngexesha lokukhutshwa koqoqosho
I-FXCC ivumela bonke abathengi kungakhathaliseki ukuba ubungakanani bezentengiselwano zorhwebo ngaphambili kunye nokubeka imiyalelo emitsha ngexesha lokukhululwa koqoqosho oluphambili. Ngethuba lokukhutshwa kwezi zinto, kwaye ngamanye amaxesha okungahambisani nokuthengwa kwemakethi, ibhidi / isibonelelo esisasazekayo siphezulu kunezo zikhoyo ngexesha leemeko 'eziqhelekileyo'.
Uhlobo luni lomthengisi?
Naluphi na uhlobo lomthengisi ozijonga ukuba nguwe: inxalenye yexesha, ixesha elipheleleyo, okanye i-hobbyist kwaye nayiphi na izinga lakho lamava kukho konke okusebenzayo kwintengiso, efana neyabathengisi abatsha njengoko kubona abanamava; isimo sengqondo sobugcisa ekuthengiseni ngaso sonke isikhathi. Abahwebi kufuneka bahlale behlala, nangakhathaliseki amava abo okuhweba, bafunde ukuqeqeshwa kwezohwebo kunye nokunyaniseka okukhulu kunye nobugcisa.
Ukukhetha uMthengisi oLungileyo kubaluleke kakhulu
Uhlobo lomthengisi owukhethayo yisigqibo esibalulekileyo, esiya kuba nefuthe elibi kwimpumelelo yakho. Ngaba kufuneka ukhethe umthengisi wedesksi osebenzayo, okanye umthengisi wee-disk osebenzayo? Kukhethwa ngokuthe ngqo kunye nombuzo, kwaye omnye siya kuphendula ngokukhawuleza. Abathengisi abathintekayo, abazinikezelekileyo, abaye bahlakulela umbono wobungcali kunye nendlela, kufuneka bakhethe kuphela umzekelo we-ECN / STP wokuthengisa rhoqo kwaye siza kubonisa ezinye zezizathu zokuba kutheni.
Okokuqala, uninzi lwabathengisi be-FX ngabahwebi bemini okanye abaqholi - abahwebi babo abanokuhlala kwimizuzwana, imizuzu, okanye iiyure abahwebi be-FX babengafaneli babambe amashishini akwaFX ngobusuku bobusuku. Ngako oko kufuneka kube yisigqibo esilula ukugqiba isigqibo sokuba ngaba ulungele ukusabalalisa, kodwa uhlawule ikhomishini nganye nge-ECN / STP umrhengisi, ngokubhekiselele ekusabalaleni ngokubanzi kunye ((theory) ukuhlawula iikhomishini.
Ukusebenzisana nabahwebi beefisi "benze ivenkile", zabo iimarike. Bakhululekile ukucaphula intengo yabo yokwenza izinto (kuxhomekeke kuluhlu lweemeko zabo eziguquguqukayo) ezinokubandakanya ukuba ubuncinci bawo bunjani, ngokusekelwe kubutyebi boshishino abaqhubayo egameni labo abathengi. Ngenxa yoko iicatshulwa zabo ziyi-quotes.
Ukusebenza kwireka ngokusasazeka ngokuqhelekileyo, kungathi kubonakale kukhangayo ukuba bacaphuna ukusasazeka okuthe ngqo, umzekelo, enye ipayipi kwi-EUR / USD. Nangona kunjalo, abahwebi banokufumana ama-slippage kunye namahlwempu azaliswayo, oku kuthetha ukuba inyaniso bazaliswa ngoku kude kwixabiso lemarike yinyaniso ukuba ukusasazeka kufutshane namibini, okanye iipips ezintathu ngokuthengiselana. Umthengisi weekhonkco osebenzayo unokulibazisa ukuzalisa umyalelo kwizame zokufumana ixabiso elihle lomthengisi.
Nangona kunjalo, umahluko omkhulu kakhulu phakathi kokusebenzisana nedeski kunye nabakwa-ECN / STP nabathengi ngento yokuba abadayisi beeeskontsi benza ngokubhekiselele kubathengi babo. Ukuba umthengi wee desk iphumelela kwaye umthengisi ulahlekelwa, bathenda ngokukhawuleza kumxhasi. Ngoku ke ingxabano ingafakwa phambili ukuba imirhumo eninzi i-broker dek deal isingathathi ngokwemiqathango yesiphumo, inyaniso isala ukuba umthengisi weekhonkco osebenzayo uthatha indawo ejongene nenzuzo ukuba umthengi ulahlekelwe.
Ngomzekelo we-ECN / STP ukusabalala kuyahluka, kuxhomekeka kwiimeko zeemarike zinyani naziphi na ixesha kunye neengcaphuno ezibonelelwa ngababoneleli-mali; equkethe amabhanki amakhulu kunye namaziko afake isandla kwi-network yomnxibelelwano. Abahwebi bahlawula umrhumo omncinci wokuthengiselana kwintengiso nganye kwaye akukho ke iikhomishini ezihlawulwayo. Ngomthengisi we-ECN / STP baba ibhuloho, umzila phakathi komrhwebi kunye nemarike. Umrhwebi ufikelela ngqo kwiimarike nge-elektroniki eyenzelwe indawo yeemarike kungekho mqobo, akukho phazamiso kwaye akukho nongenelelo. Amaxabiso avela kwintanethi, ichibi lokuthengwa kwamanzi elenziwe ngabaxhasi.
Ngomzekelo we-ECN / STP akukho naluphi na ukucaphulwa kwakhona, zonke iilayali zizaliswe ngexabiso elihle kunakho nawuphi na ixesha. Ngamanye amaxesha izi ngcaphuno zingabonakala zixabiseke kakhulu, njengezantsi njengepesenti ye-pip, mhlawumbi i-0.1 kuxhomekeke kumyinge wezenzo ngaphakathi kwe-ECN kwaye leyo leyo isisenza kwenye inzuzo ebalulekileyo yokuthengisa nge-ECN / STP broker; ubunzulu beemarike.